ShweMinThar: January 2018
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းများ၏ဖုန်းနံပါတ်များ (Rangon, Mandalay and Nay Pyi Taw)
ယနေ့ခေတ်တွင် ဒုစရိုက်မှုများ ပိုမိုများပြားလာပြီး သိက္ခာမဲ့သော နိုင်ငံအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလုနီးပါးဖြစ်နေပါသဖြင့် လိုအပ်လျှင် အသုံးပြုနိုင်ရန် မျှဝေထားပါ
ရှေ့သို့လှမ်းချီ ၊ တိုးတက်ပြောင်းလဲရန် ကြိုးစားနေသော ဒီမိုကရေစီ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၊ မည်သူမဆို ၊ အေးချမ်း ၊ လုံခြုံစွာ ...နေခြင်သည်မှာ ... ပြည်သူအားလုံး ဆန္ဒပါ။
# မြန်မာပြည်သား@ကို ဂျက်
Myanmar စွယ်စုံဗဟုသုတ ။
Posted by Alex Aung at 4:21 AM No comments:
Labels: Addresses, News and Info
အရင်တစ်ပတ်က Psychopath နဲ့ Sociopath
အကြောင်းရေးတော့ အချို့သူတွေက အဲ့ဒီ၂မျိုးထဲက
ဘယ်တစ်ခုမှာ သူတို့ပါဝင်နေလဲ သိချင်ကြတယ်။ တကယ်
တော့ အဲ့ဒီ၂ခုထဲမှာ မပါလည်း ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီ
၂ခုဟာ Personality တွေ များစွာရှိတဲ့အထဲက နာမည်
ကြီးထဲ ၂ခုမို့ ဗဟုသုတရအောင် ရှင်းပြခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါ
တယ်။ အဲ့ဒီ ၂ခုထဲက အချို့ အချက်တွေတူပြီး အချို့
အချက်တွေ မတူတာလည်း ရှိမယ်။ လုံးဝမတူတာလည်း
ရှိမယ်။ တူတူ မတူတူ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ဗဟုသုတရရုံသာ
အခုလည်း အခြား Personality တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Narcissist
အကြောင်းလေး ပြောပြပါအုံးမယ်။ ဒီတစ်မျိုးကတော့ ဘဝ
မှာ ၂ယောက်၃ယောက်လောက် တွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အရင်
ဆုံး ဒီအကြောင်း မပြောခင် အတ္တအကြောင်း နည်းနည်း
ပြောပါမယ်။ လူတိုင်းဟာ အတ္တနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာ
ချည်းပါပဲ။ အနည်းအများ အချိုးအစား ကွာခြားကြတာပဲ
ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်မတွေးတဲ့သူဆိုတာ မရှိ
သလောက်ရှားပါတယ်။ လူတိုင်း ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်တွေး
ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အတ္တရှိပါတယ်။ အတ္တဆိုတာ
ရှိသင့်သလောက် ရှိရင် ကိစ္စမရှိပေမယ့် အတ္တကြီးလာတဲ့
အခါမှာတော့ မကောင်းတာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
Narcissist ဆိုတာ အတ္တ အင်မတန်ကြီးသူတွေဖြစ်ပါ
တယ်။ သူတို့ရဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့...
👉 မှားတာ ဘယ်တော့မှ ဝန်မခံဘူး။
👉စိတ်ခံစားမှုကို ဦးစားမပေးဘူး။ သံယောဇဉ်ဆိုတာကို
👉သူတို့ကို စိန်ခေါ်တာမျိုးဆိုရင် ဒေါသထွက်တတ်တယ်။
👉သူတို့လိုချင်တာ မရတဲ့အခါ ကလေးဆန်ဆန် အပြုအမူ
👉သူတို့ ရန်သူလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့သူရဲ့ စိတ်ကို အဓိက
တတ်တယ်။ သူတို့ရန်သူရဲ့စိတ်ကို မသိမသာ
သွင်းတတ်တယ်။ သံသယစိတ်တွေ သွင်း
မှု ကျဆင်းအောင် လုပ်တတ်တယ်။
👉ရန်သူလို့ သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သူကို ကလဲ့စားချေ
👉စာနာစိတ်မရှိဘူး။ လူတွေကို အသုံးချစရာ တစ်ခု
👉သူများ လေးစားအားကျတာ အရမ်းလိုချင်ကြတယ်။
👉 ဝေဖန်ခံရတာ လုံးဝမကြိုက်ဘူး။
👉စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်လွယ်တယ်။ စကားသိပ်အမှားမခံဘူး။
အထက်ပါအချက်တွေထဲက တော်တော်များများ တူနေရင်တော့
သင် Narcissist တစ်ယောက်နဲ့ တွေ့နေပါပြီ။ သူတို့နဲ့ Relationship ရှိသူတွေဆို တော်တော်ခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။ အစပိုင်း အချစ်ရေးအရမ်းကောင်းသလိုနဲ့ နောက်ပိုင်း သင်ဘာလုပ်လုပ် သူတို့အတွက်မလုံလောက်တော့သလို ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အစစ အရာရာ အနစ်နာခံပြီး အရာအားလုံးပေးဆပ်တဲ့အခါ သူတို့က ရသမျှယူပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့်သင့်ကို ပြန်ပေးတဲ့အရာက မရှိသလောက် ရှားလာပါလိမ့်မယ်။ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုပြောတာမဟုတ်ပါ။ ဂရုစိုက်မှု၊ ကြင်နာမှု၊
ဖေးမမှု စတာတွေ တဖြည်းဖြည်း နည်းပါးလာပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးတော့ လှိုက်စားခံလိုက်ရပြီး ဘာမှ မကျန်တဲ့သူတစ်ယောက်လိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ ဂျုံးဂျုံးကျသွားပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါ Narcissist စစ်စစ်တစ်ယောက်ကို ချစ်မိတဲ့ သာမန်လူအများစု ခံစားရလေ့ရှိတဲ့အရာပါ။ (ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သူနဲ့ စရိုက်အတူတူပဲ ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့)
သာမန်လူတွေကတော့ တစ်နေ့နေ့များ ကိုယ်ချစ်တဲ့အချစ်တွေကို အသိအမှတ်ပြု ပြန်ဂရုစိုက်လေမလားဆိုပြီး ပေးဆပ်ရင်းနဲ့ လုံးပါးပါးသွားကြတာများပါတယ်။
Narcissistic rage ဆိုတာလေးလည်း ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။
သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ အစော်ကားခံရတာမျိုး..သူတို့ယုံကြည်ရာ တစ်ခုခု အစော်ကား ခံရတာမျိုးဆို ဒေါသအရမ်းထွက်တတ်ကြပါတယ်။ တော်တော်ကြီးကို ဆိုးရွားတဲ့ဒေါသပါ။ Control မရှိတော့လောက်အောင် ထွက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Narcissist နဲ့ Psychopath ၂မျိုးရောနေတဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့ ဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့။ ကလဲ့စားချေတာတွေ အရမ်းကြမ်းတတ်ပါတယ်။ သာမန် Narcissist တောင်မှ တစ်ခါတစ်လေ ကလဲ့စားချေတာ ကြမ်းတတ်ပါတယ်။ သူတို့ကို သူတို့မြင်တဲ့ Self Esteem ဆိုတာကို သွားထိမိရင် ဒေါသမထိန်းနိုင်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ လျှိ့ဝှက်ပြီး လူသိမခံချင်တဲ့အရာပေါ်သွားတာမျိုး..သူတို့ရဲ့ အရေးပါမှုကို မေးခွန်းထုတ်ခံရတာမျိုး..စတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာ ဒေါသထွက်တတ်ကြပါတယ်။
သူတို့ကို သူတို့ အမြဲတမ်း အမြင့်မှာ တင်ထားတဲ့အတွက် လူတွေအဲ့လို
သိသွားတဲ့အခါ အမြင့်က ပြုတ်ကျသလိုမျိုး ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါ သူတို့ ဘယ်လိုတွေးလဲ သင်သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ သူတို့တွေးတာနဲ့ သာမန်လူတွေတွေးတာ ကွာခြားလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့တွေးတာတွေက..
👉ငါနဲ့အဆင့်အတန်းတူတာ သိပ်မရှိဘူး..ငါသည်သာ အကောင်းဆုံး
ငါ့လောက်တော်တာ နည်းနည်းပါးပါးတော့ လောကကြီးမှာ ရှိလိမ့်
မယ်။ ဒါပေမယ့် အခုထက်ထိ မတွေ့ဘူးသေးဘူး။
👉စည်းမျဉ်းတွေ စည်းကမ်းတွေဆိုတာ သာမန်လူတွေ အတွက်ပဲ။ ငါ့အတွက်​ မဟုတ်ဘူး။
👉မင်းတို့လည်း ငါ့လောက်တော်ရင်ကောင်းမယ်လို့ တစ်ခါတစ်လေ
တော့ စဉ်းစားမိသား။ ဒါပေမယ့် မင်းတို့ ဘယ်တော့မှ ငါ့လောက်
👉ငါဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ မင်းက ငါ့အပေါ် သစ္စာရှိဖို့လိုတယ်။ (သစ္စာ
👉ငါ့အောင်မြင်မှုတွေကို မင်းလေးစားဖို့လိုတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့လို
တယ်။ ငါပြောမယ့်အရာတွေကိုလည်း အမြဲစိတ်ဝင်စားပါ။
👉ငါက လူတွေကို အသုံးချတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ငါ့နည်းငါ့ဟန်နဲ့ အလုပ်ပြီးအောင်လုပ်တာပါ။ သူများတွေ ထိခိုက်နစ်နာလား မနစ်နာလားငါစိတ်မဝင်စားဘူး။
အထက်ပါအချက်တွေက Narcissist အများစု တွေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကသင်တွေးသလို တွေးမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အမြဲသတိပြုပါ။
Narcissist တိုင်း အရမ်းဆိုးရွားကြတာတော့ မဟုတ်ပါဘူ။ ဘယ်လောက် အတ္တပြင်းထန်လဲ ဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီး ဆိုးတဲ့အတိုင်းအတာကွာခြားတတ်ကြပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့သူတွေမှာလည်း အတ္တစိတ်ရှိတတ်ကြပါတယ်။ အတ္တလွန်ပြီး နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ Narcissistတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ဟစ်တလာပေါ့။
ဆိုးဆိုးရွားရွား ရက်စက်တဲ့အဆင့်မရောက်ပဲ အောင်မြင်နေတဲ့အထဲ
မှာတော့ Kim Kardarshian, KanyeWest, Donald Trump ဘောလုံးလောကထဲမှာဆိုရင်တော့ မိုဗစ်ခ်ျ၊ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒို၊ မော်ရင်ဟို၊ ဘာလော့တယ်လီ စတာတွေရှိပါတယ်။ သူတို့ကတော့ အတ္တစိတ်ကို အခြေခံပြီး အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
Narcissist ဖြစ်ခြင်းက ကောင်းလား...မကောင်းဘူးလား...အဲ့ဒါကတော့ မှတ်ချက်မပေးလိုပါ။ မိမိ တစ်ယောက်ထဲရဲ့ အမြင်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ အတ္တဟာ ရှိသင့်သလောက်ရှိတာ ကောင်းပါတယ်။ အခြားသူတွေကို မထိခိုက်သရွေ့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ အခြားသူတွေ ထိခိုက်လောက်အောင် အတ္တကြီးတာကတော့ မကောင်းဘူးလို့မြင်ပါတယ်။
သင်ဟာ Narcissist, Psychopath, Sociopath တွေထဲမှာ တစ်ခုမှမပါလည်း ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ Personality တွေထဲက
နာမည်ကြီးတွေ Personality တွေကိုသာ ဗဟုသုရအောင်
#မိုးရှင်း (I.M.T) ရေးသားသည်။
Posted by Alex Aung at 2:56 AM No comments:
Labels: Opinion, psychology, ဆောင်းပါး
Posted by Alex Aung at 3:39 AM No comments:
1.အမျိုးသား​တွေမှာ ဖြစ်​နိုင်​ရင်​ ၁၁နှစ်​ ၁၂နှစ်​​လောက်​တည်းက
Underwearဝတ်​​ပေးသင့်​ပါတယ်​၊အဲ့အရွယ်​မှာ underwearကို မဝတ်​မိရင်​မဖြစ်​သင့်​တဲ့ ​ရောဂါ​တွေ ဖြစ်​လာတတ်​ပါတယ်​၊
ဆိုပီး ဖြစ်​ကလဲ့ဆန်းမထားသင့်​ပါဘူး။သူက မဝတ်​ချင်​ရင်​​တောင်​
မိဘ​တွေက ​သေချာနားလည်​​အောင်​ရှင်းပြပီး Underwear ဝတ်​ဖို့တိုက်​တွန်းသင့်​ပါတယ်​။ရှက်​​နေဖို့မလိုဖို့လည်း နားဝင်​​အောင်​​ပြောပြသင့်​ပါတယ်​။
လူမြင်​ရတာမှ မဟုတ်​တာ ဘာလို့​ဈေးကြီး​ပေးဝယ်​မှာလဲဆိုပီး
ရှိတတ်​ပါတယ်​ ​နောက်​ပီး နှထည်​သုံးထည်​ရှိ​တော်​ပီ​​ပေါ့ကွာ
ဘာလုပ်​ဖို့ အများကြီးဝယ်​ထားမှာလဲဆိုပီး ဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​
ဒါဟာ အမျိုးသားဆယ်​​ယောက်​မှာ ၇​ယောက်​​လောက်​က ဒီလိုကြီးပါဘဲ။(ကျ​တော်​က​တော့ ကျန်​တဲ့သုံး​ယောက်​ထဲမှာပါတယ်​)
ဒီinvestmentကကိုယ့်​ရဲ့ ကျန်းမာ​ရေးကိုအများကြီးအ​ထောက်​အကူပြု​ပေးပါတယ်​။အမျိုးသားတ​ယောက်​မှာ အနည်းဆုံး​တော့ Underwear ၁၀ထည်​​လောက်​ရှိသင့်​ပါတယ်​။(ကျ​တော်​ဆို အထည်​သုံးဆယ်​​လောက်​ရှိတယ်​ကြွားတာ ကြွားတာ.😁)
ဒါမှလည်း ​နေ့တိုင်းအလဲအလည်​လုပ်​ပီး သန့်​သန့်​ရှင်းရှင်းဝတ်​လို့ရမှာ ​ပေါ့​နော်​။​နွေရာသီအ​ကြောင်းမဟုတ်​​ပေမယ့်​
​နောက်​ပီး ​တွေ့ကရာကို ဝယ်​မဝတ်​ပါနဲ့။ တူတူတန်​တန်​​လေး တထည်​ကို အနည်းဆုံး​လေးငါး​ထောင်​​လောက်​​တော့ ​ပေးဝယ်​ဝတ်​ပါ။ ဒါမှလည်း ကိုယ့်​အတွက်​ ​နေရထိုင်​ရ သက်​​သောင့်​သက်​သာရှိပီး ကြာရှည်​လည်း ဝတ်​လို့ရမှာ​ပေါ့​နော်​။
ဥပမာ MIG Myanmarလို​ပေါ့။တ​ထောင့်​ငါးရာ နှ​ထောင်​​တွေ ​လေးငါးဆယ်​ထည်​ဝယ်​မယ့်​အစား ဒါမျိုး​လေး သုံး​လေးထည်​​လောက်​ ဝယ်​လိုက်​ရင်​ ပိုပီး​တော့safetyဖြစ်​တာ​ပေါ့​နော်​။
3.​လျှော်​ဖွတ်​ မီးပူတိုက်​ဖို့ မပျင်းပါနဲ့။
အမျိုးသား​တွေအတွက်​ အပျင်းဆုံးအလုပ်​ပါ။ မ​လျှော်​ဘဲ နှရက်​ဆက်​တိုက်​ ဝတ်​တာတို့ စိုထိုင်း​နေတဲ့ဟာမျိုးကို ဝတ်​တာတို့လုံးဝမလုပ်​ပါနဲ့။အတွင်းခံ​အဝတ်​က အပြင်​အဝတ်​ထက်​ ပိုပီးသန့်​ရှင်းဖို့လိုပါတယ်​။အပြင်​မှာထုတ်​လှမ်းဖို့ မရှက်​ပါနဲ့။
ဟိုအင်္ကျီ​အောက်​သွားလှမ်း ဟိုပုဆိုး​အောက်​သွားလှမ်းပုန်းလျှိုးကွယ်​လျှိုး မလှမ်းကြပါနဲ့။ဒါရှက်​စရာမဟုတ်​ပါဘူး။​နေ့စဉ်​​လျှော်​ဖွတ်​ပီး ​နေ​ရောင်​ရတဲ့​နေရာမှာ ချိတ်​နဲ့​သေချာ ​ခြောက်​​အောင်​လှမ်း​ပေးပါ။ကိုယ့်​အဝတ်​ကိုယ်​ ကိုယ့်​အိမ်​​ရှေ့ကိုယ်​လှမ်းတာ
​ခြောက်​သွားရင်​ မီးပူတိုက်​ပီး ​သေချာသိမ်းပါ မပျင်းပါနဲ့။
4.အပြင်​အဝတ်​နဲ့ လိုက်​ဖက်​ညီမယ့်​ အတွင်းခံကို​ရွေးချယ်​တတ်​ပါ​စေ။ဥပမာ ကိုယ်​က ပုဆိုးဝတ်​မယ်​ဆိုရင်​ boxerဝတ်​တာ အသင့်​​တော်​ဆုံးပါ ပုဆိုးဝတ်​ပီး​အောက်​ကBriefဝတ်​ထားရင်​
တကယ်​ကြည့်​ရဆိုးပါတယ်​။​နောက်​မှာv lineကြီး​ပေါ်​နေတာက အမျိုးသား​ရော အမျိုးသမီး​ရောအတူတူဘဲ လုံးဝအကြည့်​ရဆိုးပါတယ်​။ပုဆိုးမှ မဟုတ်​ဘဲ အသားနဲ့အရမ်းကပ်​​နေတဲ့pants​တွေsport suit​တွေဆိုလည်းboxerနဲ့က အသင့်​​တော်​ဆုံးပါ
Breifက​တော့ Boxerထက်​စာရင်​ ပင့်​တင်​မှုပိုအား​ကောင်းပါတယ်​။အပြင်​ကခပ်​ပွပွအဝတ်​အစား​တွေနဲ့ဆိုရင်​Breifကပိုပီးသင့်​​တော်​ပါတယ်​။
တချို့​တွေက ရှိတယ်​ ဝတ်​ပီး ပီး​ရောဆိုပီး ဝတ်​ဆင်​တတ်​ကြတယ်​
​အောက်​မှာက ​ဘေး​ရောက်​လို့​ရောက်​ တခြမ်း​စောင်းလို့​စောင်း
တပါးသူမြင်​ရကြည့်​ရဆိုး​စေပါတယ်​။ Girlfriendနဲ့Dateမယ့်​​နေ့ဆိုရင်​ အဂွမ်း​ပေါ့​နော်​။ ဒါ​ကြောင့်​ အမျိုးသားတွေunderwearဝတ်​မယ်​ဆိုရင်​ ​နေရာတကျ အထားအသိုမှန်​မှန်​ ဝတ်​ကြရမယ်​​နော်​။
ဘာလဲဆို​တော့ ​ဖော်​ဝတ်​ကြတာပါ။ လူငယ်​​ယောကျာ်​​လေး​တော်​​တော်​များများ အတွင်းခံကိုမ​ပေါ်​ပေါ်​အောင်​​ဖော်​ဝတ်​ကြတာဘဲ။ ဒါဟာအယူအဆအမှားပါ။နိုင်​ငံခြားက ​မော်​ဒယ်​လ်​​တွေကို အားမကျပါနဲ့။သူတို့ကဒီbrandကို ​ကြေငြာ​ပေးရတဲ့အတွက်​
အဲ့လို အတွင်းခံကို တဝက်​​လောက်​ထိ​ဖော်​ဝတ်​ကြတာက
ကိုယ့်​ဝတ်​ထားတဲ့ အတွင်းခံ ​ဈေးကြီးသည်​ဖြစ်​​စေ
​ဈေး​ပေါသည်​ဖြစ်​​စေ ​ဖော်​မဝတ်​ပါနဲ့။ ကျ​တော်​တို့လည်း ငယ်​ငယ်​တုန်းက​တော့Knowledgeမရှိ​တော့ သူများလုပ်​တိုင်း
​အောက်​ကအတွင်းခံကို မ​ပေါ် ​ပေါ်​အောင်​ ဝတ်​ခဲ့ဖူးတယ်​။
​နောက်​ပိုင်း စာ​တွေဖတ်​တာများလာ​တော့ဒါဟာ အမှားကြီးပါလာဆိုပီး ဆင်​ခြင်​တတ်​သွားတယ်​။
အင်္ဂလိပ်​လို underwearမြန်​မာလို အတွင်းခံ ရှင်းရှင်း​လေးဘဲ​လေ​နော်​။အတွင်းခံဆိုတဲ့အတိုင်း အတွင်းမှာဘဲရှိသင့်​တာ​ပေါ့
Styleကျကျ​နေတတ်​တဲ့သူတိုင်းက အတွင်းခံကို ဘယ်​​တော့​ပေါ်​အောင်​မဝတ်​တတ်​ကြပါဘူး။ဒါကsexyဖြစ်​တာမဟုတ်​ပါဘူး ​ခေတ်​စကားနဲ့ဆိုရုပ်​​ပေါက်​တာ​ပေါ့​နော်​။
ဥပမာ ကိုယ့်​သူငယ်​ချင်း​တွေနဲ့ သွားရင်းလာရင်း မ​တော်​တဆ ​ပေါ်သွားတာ ၊ ညဘက်​ကလပ်​​တွေ bar​တွေမှာ ​ပေါ်သွားတာ၊
Busကား​ပေါ်မှာ မ​တော်​တဆ ​ပေါ်သွားတာအ​ကြောင်းမဟုတ်​​ပေမယ့်​ အ​ရေးကြီးတဲ့ လူနဲ့​တွေ့ရတဲ့အခါမျိုး Interviewလိုမျို အခါမျိုးမှာ ကိုယ့်​ရဲ့underwear​ပေါ်​နေတာကြီးက Impression ကို​ဒေါင်း​စေပီးအမှတ်​​လျော့​စေပါတယ်​။
ဒါ​ကြောင့်​ အယူအဆမှား အတူယူမှား​နေတာကြီးကို
ဝမ်း​ရေးကလည်း အ​ရေးကြီးတာ​ပေါ့​နော်​။ဒီ​ခေတ်​မှာလူတ​ယောက်​ရဲ့ incomeကအနည်း​တော့တသိန်းခွဲ ​အောက်​ထစ်​ရှိပါတယ်​။
တသိန်းခွဲရတဲ့သူက တထည်​ကို နှ​သောင်း သုံး​သောင်း​ပေးဝယ်​ရတဲ့underwearကို ဝယ်​မဝတ်​မှာ​တော့​သေချာတယ်​။ဝယ်​လည်းမဝတ်​သင့်​ပါဘူး။ဒါကြီးကို အဲ့​လောက်​​ပေးဝတ်​မယ့်​အစား
ဂျင်း​ဘောင်​ဘီတထည်​ဖြစ်​ဖြစ်​ ရှပ်​အင်္ကျီ​ကောင်း​ကောင်း တထည်​ဖြစ်​ဖြစ်​ ဝယ်​ဝတ်​မှာ​ပေါ့​နော်​။ကိုယ့်​လည်းတတ်​နိုင်​ quality​လေးလည်းမဆိုးတာမျိုး​ပေါ့။Model​တွေcelebrity​တွေလို​တော့
ကိုယ့်​ရဲ့တလဝင်​​ငွေ​လေးနဲ့ ချိန်​ကိုက်​ပီး ​လေးငါး​ထောင်​​လောက်​ရနိုင်​မယ့်​ ဟာကိုစဉ်းစားရမှာ​ပေါ့။
အခု ဒီM.I.GလိုမျိုးBrandဆိုရင်​ တထည်​ကို ​လေးငါး​ထောင်​နဲ့ရနိုင်​တယ်​။ Comfortလည်းဖြစ်​တယ်​။ကျန်းမာ​ရေးနဲ့လည်း ညီညွတ်​တယ်​။ကျ​တော်​ ကိုယ်​တိုင်းလည်း ဝယ်​ဖူးလို့
မသုံးဖူးမဝတ်​ဖူးဘဲနဲ့​တော့ ပါးစပ်​က ​ပေါက်​လွှတ်​ပဲစားမ​ပြောရဲပါဘူးဗျာ။ M.I.Gမှာဆိုရင်​ ကျ​တော်​​တွေ့ရသ​လောက်​က​တော့
Briefဆိုရင်​ သူက တဘူးမှာ 2pcsပါတယ်​။8​ထောင်​ 9​ထောင်​ဝန်းကျင်​ရှိမယ်​။ Boxerက​တော့ 1pcsကိုဘဲကိုး​ထောင်​ နီပါး​လောက်​ရှိတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ ​ပေးရတဲ့​ဈေးနဲ့ ရတဲ့ရလဒ်​က
တကယ့်​ကိုတန်​ပါတယ်​။​လေဝင်​​လေထွက်​​ကောင်းသလို ကိုယ့်​အတွက်​comfortလည်းဖြစ်​တယ်​၊ကျန်းမား​ရေးနဲ့လည်း ညီညွတ်​တယ်​၊အ​လျှော်​လည်း ခံတယ်​၊ဝတ်​လို့ဝတ်​ထားမှန်း​တောင်​ မသိသာဘူး။မဆိုးပါဘူး ဝတ်​​ပျော်​ပါတယ်​ဗျာ။
​ဈေးကြီးတာနဲ့ ​ဈေး​ပေါတာ ဘာကွာသွားလဲဆို​တော့ အ​လျော်​ခံတာ မခံတာရယ်​၊Sizeမမှန်​တာရယ်​၊ ကိုယ့်​အတွက်​ ​လေဝင်​​လေထွက်​မ​ကောင်းဘဲUnderwearကိုမဝတ်​ချင်​​လောက်​​အောင်​
မြန်​မြန်​​ပြေးပီး ချွတ်​ပစ်​ချင်​​လောက်​​အောင်​ ဒါဘဲ ကွာတာပါ။
ကိုယ့်​အ​နေထားကိုယ်​ မှန်းပီး​တော့ ဝယ်​ပေါ့ဗျာ.😁Size​ရွေးမှားရင်​ ဘာဖြစ်​လဲဆို​တော့ အရမ်းကျပ်​ရင်​လည်း စိတ်​ကျဉ်းကျပ်​ပီး
ယားသလို လို ကုပ်​ချင်​သလို လိုနဲ့မြန်​မြန်​ကိုချွတ်​ဖြစ်​ချက်​​လောက်​​အောင်​ထိဖြစ်​ပါတယ်​။ပွလွန်းရင်​လည်း ​ပေါ​လောကြီးဖြစ်​ပီး
သက်​သက်​ကြီးစီဖြစ်​​နေပီး ကိုယ့်​ကိုကိုယ်​ယုံကြည်​မှုနည်း​စေပါတယ်​။ဒါ​ကြောင့်​ size​ရွေးချယ်​တာလည်း မမှားဖို့လိုတယ်​​နော်​
အပြင်​ထည်​​တွေထက်​စာရင်​ ဘူးနဲ့packagingသပ်​သပ်​ရပ်​ရပ်​နဲ့လာတဲ့စာမျိုး​တွေကMediumဆိုလည်းmedium, Largeဆိုရင်​large, Sizeအတိအကျမှန်​ပါတယ်​။
ကဲအခုဆိုရင်​ ပုံထဲမှာ​ရော ကျ​တော်​​ပြောပြတဲ့tips​လေး​တွေအရ​ရောအမျိုးသား​တွေအတွက်​ underwear knowledge​ကောင်း​ကောင်းရသွားမယ်​လို့ထင်​ပါတယ်​ဗျ။
ပုံ​လေး​တွေက​တော့ M.I.G underwearကပါ
Credit: Min Thant´s Beauty Book.💓
Posted by Alex Aung at 3:46 AM No comments:
Posted by Alex Aung at 3:05 AM No comments:
ဒီစကားလုံး ၂လုံးကို ကြားဖူးတဲ့သူတွေ ရှိကြမှာပါ။
ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာလည်း ပါတတ်ပါတယ်။ ဒီစကား၂လုံးက
တူသယောင်ယောင်ဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်လေ ရောထွေး
တတ်ပါတယ်။ ဒီလို လူမျိုးတွေဟာ ပြင်ပလောကမှာလည်း
တကယ်ရှိပြီး တစ်နေ့သင်ကြုံတွေ့နုိုင်ရတာမို့ ကျွန်တော်
သူတို့နှစ်မျိုးလုံးကို ခြုံငုံပြီးပြောရရင် လူ့ခွစာတွေ..
ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားဟာ ဒီထက်အများ
ဘယ်လိုလဲဆိုတာ ကြည့်ချင်ရင် ရှားလော့ဟုမ်းကို
ကြည့်ပါ။ သူ့ကိုယ်သူလည်း High-funtioning
sociopath လို့တင်စားလေ့ရှိပါတယ်။ Psychopath
Patrick Bateman ("American Psycho"),
Norman Bates ("Psycho"),
Hannibal Lecter ("Silence of the Lambs")
တို့ကို ကြည့်ပါ။ သူတို့က အနီးစပ်ဆုံးသာဖြစ်ပါတယ်။
အတိအကျကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အရမ်း Violent
မဖြစ်တဲ့ Psychopath တွေလည်း ရှိပါတယ်။ Violent
တော့ မဖြစ်ပဲ သူတစ်ပါးကို ချနင်းပြီး ဘဝတက်လမ်း
ရှာတတ်တဲ့ Psychopath တွေလည်း ရှိပါတယ်။
👉သူတို့ဘဝတက်လမ်းအတွက်ဆို သူတစ်ပါးကို ချနင်းရ
အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ သင် Psychopath တစ်ယောက်သို့မဟုတ်
Sociopath တစ်ယောက်နဲ့ ကြုံတွေ့နေတာ ဖြစ်နိုင်ချေများ
ပါတယ်။ Psychopath နဲ့ Sociopath ဘာကွာလဲကြည့်ရ
✏Psychopath Vs Sociopath✏
Psychopath တွေက Cold-hearted တွေ များပါတယ်။
သူတို့ကိုPsychopath တစ်ယောက်မှန်း သင်သတိထားမိဖို့
ဟန်ဆောင်တာလည်း အရမ်းတော်ပါတယ်။ သင့်အကြောင်း
စိတ်ဝင်စားချင်ယောင်ဆောင်ပေမယ့် ရင်ထဲမှာ အဖက်တောင်
မလုပ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုကို ရဖို့ သင့်ကို
လိမ်ညာလှည့်ဖျားပေါင်းသင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က
ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ အကွက်ချပြီးမှ စနစ်တကျ
လှုပ်ရှားတတ်ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ
သာမန်လူတွေနဲ့ မတူတာတွေရှိနေတယ်။ သာမန်လူဟာ
သွေးမြင်ရင်..သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှု တစ်ခုခုမြင်ရင်
ပဲ။ အဲ့ဒီအချက်ကြောင့်ပဲ အန္တရာယ်ရှိတဲ့အလုပ်တွေ
လုပ်တဲ့နေရာမှာ သူတို့ဟာ လက်ရဲဇက်ရဲရှိတတ်
ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့လုပ်လိုက်တဲ့အရာရဲ့ ဆိုးကျိုး
Sociopath တွေကျတော့ အဲ့လို မဟုတ်ဘူး။ သူတို့က
တစ်ယောက်တည်းနေတာ များတယ်။ သူတို့အကြောင်း
ကလွဲပြီး သူများအကြောင်းသိပ်စိတ်မဝင်စားဘူး။ သူတို့
က အပြစ်လည်း ဝန်ခံလေ့မရှိဘူး။ အမြဲတမ်း ဆင်ခြေ
ဆင်တက် ရှိတတ်တယ်။ သူတို့ကို အချို့ပညာရှင်တွေ
က “Hot-headed” လို့ခေါ်လေ့ရှိတယ်။ သူတို့က
တစ်ခါတစ်လေသေချာ မစဉ်းစားပဲ လုပ်ချင်တာ
တစ်ခွန်း သူများကိုထိခိုက်သွားလား သိပ်ပြီး မစဉ်းစား
Psychopath တွေကတော့ သန္ဓေတည်စဉ်ထဲက..ဗီဇဓာတ်
Sociopath တွေဟာ မွေးရာပါ ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပဲ
ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ သက်ရောက်မှုကြောင့် Sociopath
ပုံစံဖြစ်လာကြတာများပါတယ်။ ငယ်စဉ်က အနုိုင်ကျင့်
ခံရတာမျိုး...မိသားစုထဲမှာ အနိုင်ကျင့်တဲ့ မိခင်..ဖခင်
ရှိနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းက မွေးဖွားလာသူ
Psychopath တွေဟာ သူတို့ဘဝတစ်လျှောက်
တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုပိုပြီး အန္တရာယ်ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်
ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ သူများကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်ခြေဟာ
တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုလူမျိုးတွေကို လျော့တွက်လို့
မရပါဘူး။ သူတို့ဟာ အပြစ်ပေးခံရမှာလည်း သိပ်ကြောက်
လေ့မရှိပါဘူး။ ခံစားတတ်တဲ့အပိုင်းတွေ သိပ်အလုပ်
မလုပ်ကြပါဘူး။ အကြောက်အလန့်လည်း နည်းတတ်ကြ
ပါတယ်။ ဖိအားဝင်တာလည်း နည်းတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်
သွေးအေးအေးနဲ့ ရက်ရက်စက်စက်လည်း လုပ်တတ်ကြပါ
Sociopath တွေကတော့ အချိန်ကြာလာလေလေ
သူတို့ဟာ သာမန်လူတွေလို စိတ်ဖိစီးမှု..စိုးရိမ်မှု..ကြောင့်ကြမှု..
Psychopath တွေက အရမ်းသွေးအေးကြတယ်...ဘာမှ
မဖြစ်သလိုဟန်ဆောင်တတ်ကြတယ်။ သူတို့က လူတွေနဲ့
ဆက်ဆံရတာ သိပ်ပြီးမကြိုက်ပေမယ့် သူတို့အတွက်လိုအပ်ရင်
Sociopath တွေကတော့ Angry Loser တွေ ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။
ရှုံးပြီဆို ဒေါသအကြီးအကျယ်ထွက်လေ့ရှိတယ်။ ရှားလော့ဟုမ်း
လည်း ဒီလိုပဲ အမှုတွေ မပေါ်ပဲ သူ့ဘက်က အရေးနိမ့်နေရင်
နေလို့ ထိုင်လို့ အဆင်မပြေဖြစ်လာရော..
Psychopath တွေမှာ သူတစ်ပါးကို စာနာတတ်ခြင်း
သူတို့ မသိပါဘူး။ ဟန်ဆောင်ပြီး စိတ်မကောင်းချင်ယောင်
ဆောင်တတ်ပေမယ့် ရင်ထဲမှာဘယ်တော့မှ သူများအတွက်
Sociopath တွေကတော့ ခံစားမှုရှိပါတယ်။ ကိုယ်ချင်းစာ
တရားလည်း ရှိပါတယ်။ လူအများစုမှာရှိတာထက်တော့
နည်းပါတယ်။ နောက်ပြီးအချိန်တိုင်း ခံစားမှုတွေကို
ရိုက်ချိုးထားလေ့ရှိပါတယ်။ ရှားလော့ဟုမ်းနဲ့ ဥပမာပေးရရင်
ရှားလော့ဟုမ်းဟာ သံယောဇဉ်ဆိုတာကို အားနည်းချက်လို့
ခံယူထားပြီး သူငယ်ချင်း ထားလေ့မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်
စိတ်ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီစိတ်အပြင်မထွက်အောင်
ချိုးနှိမ်ထားတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ ထိခိုက်လွယ်တဲ့
မိုးရှင်း (I.M.T) ရေးသားသည်။ Ref: webmd.com
Posted by Alex Aung at 2:51 AM No comments:
Posted by Alex Aung at 1:37 AM No comments:
Posted by Alex Aung at 1:00 AM No comments:
သင်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းကို ရပ်နားလိုက်လျှင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ?
What happens to your body when you stop exercising (workout)?
မျက်မှောက်ကာလတွင် လေ့ကျင်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလေ့အထကို လူကြီး၊လူငယ်မရွေးစိတ်ပါဝင်စားလာကြတာဟာကောင်းမွန်သောပြောင်းလဲခြင်းအလေ့အထတခုအဖြစ်ကြိုဆိုကြရမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ၈၀% ရာခိုင်နှုန်းမှာ လေ့ကျင့်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေပေမယ့်လည်း တကယ်တန်းပြုလုပ်ဖို့၊ စတင်ဖို့အတွက် ၅၀/၅၀ ဒွိဟစိတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းကတော့ "လေ့ကျင့်ခန်းရပ်နားလိုက်ရင်ဝလာမှာလား?" ဆိုတဲ့စိတ်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ။ အမြဲတမ်းမလုပ်နိုင်ဘဲ သွားမလုပ်နဲ့ပိုဝလာမယ်နော် (သို့) သိသိသာသာကိုယ်ရည်စစ်ပြောင်းလဲလာသူများကိုဆိုလျှင် ကြည့်နေပါဦး၊ လေ့ကျင့်ခန်းနားလိုက်တာနဲ့ လေပိုက်နဲ့ထိုးလိုက်သလို ဝတုတ်ပြဲလာမှာ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မနေပါနဲ့ ဝတယ်ပိန်တယ်ဆိုတာ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းမရပါဘူး။ စသည်ဖြင့် သင့်ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြားဖူးနေကြအရပ်စကားများရဲ့ လွမ်းမိုးမူ့ကလည်း ဒွိဟစိတ်ဖြစ်စေဖို့လုံလောက်တဲ့ သက်သေများလည်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ဤဆောင်းပါးဟာ သင့်ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဆီဦးတည်နေသောစိတ်ကို ပြတ်သားစွာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
မေး။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ ရပ်နားလိုက်ရင် ဝလာမှာလား?
ဖြေ။ မဝပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်လည်း ဝလာနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဖြေကတော့ Yes နဲ့ No နှစ်မျိုးလုံးပါဘဲ။ ဒါဟာသင်သိချင်၊ဖတ်ချင် (သို့)သင်နှစ်သက်မယ့်အဖြေတော့မဖြစ်နိုင်တာတော့အသေအချာပါဘဲ။
၁။ ဘာကြောင့် မဝလာနိုင်ရတာလဲ?
အထက်ပါအချက် ၂ ချက်ရဲ့အဖြေကို သိရှိဖို့ဆိုရင်တော့ ပထမဦးစွာ အဆီဘယ်လိုတည်ဆောက်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲ?ဆိုတာကိုအရင်ချဉ်းကပ်လေ့လာကြည့်ရပါမယ်။ အဆီ(Fat)ကိုလစ်ပစ်(Lipid) သို့မဟုတ် ဖက်တီးအက်ဆစ် (Fatty Acid)လို့ခေါ်တဲ့ဇီဝမော်လီကျူးများဖြင့်တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ လစ်ပစ် (Lipid)ဟာဂရိလူမျိုးဘာသာစကား လစ်ပိုစ် (Lipos)မှဆင်းသက်လာပြီး အဆီဟုအဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ (a fat isalipid butalipid is not necessarilyafat) လစ်ပစ်(Lipids) များဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်စွမ်းအင်ထွက်ပေါ်ရာအရင်းအမြစ်၊ ဟော်မုန်းဓါတ်ထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့်အခြားဆဲလ်များရဲ့အခွံလို့ခေါ်တဲ့ (Plasma Membrane)အတွက်လည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ အဆီ(Fat)ဆဲလ်များစုဖွဲ့ခြင်းဖြင့် အဆီတစ်ရူး(Fat tissue/ adipose tissue)ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ အဆီတစ်ရူးတွင် အဖြူရောင်အဆီ(White Fat) နှင့် အညိုရောင်အဆီ(Brown Fat)အဖြစ်တည်ရှိပါတယ်။ အဖြူရောင်ဟုခေါ်သော်လည်း အနည်းငယ်ဝါကျင့်ကျင့်အရောင်ရှိသောကြောင့် အဝါရောင်အဆီဟုလည်းခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ အဆီဟာအရောင်မတူညီကြသလို လုပ်ဆောင်မူ့များလည်းမတူညီကြပါဘူး။
အညိုရောင်အဆီဟာ ကယ်လိုရီအားလောင်ကျွမ်းစေပြီး ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်လိုအပ်သောအပူဓါတ်(တေဇောဓါတ်)ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ သဘာဝအရ နွေးထွေးနေစေရန် အတွက်ကလေးသူငယ်များတွင် အညိုရောင်အဆီအများအပြားဖြစ်တည်ပြီး၊ အသက်အရွယ်ကြီးပြင်းလာသည့်အလျောက်တဖြေးဖြေးလျော့ပါးလာပါတယ်။ အများသောအားဖြင့် လည်ပင်း၊ လည်ချောင်းတဝိုက်နှင့်သွေးကြောမကြီးပါတ်ဝန်းကျင်တို့တွင် အညိုရောင်အဆီများတည်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိမူ့စစ်တမ်း၊မှတ်တမ်းများအရ ပေါင်၁၅၀ရှိသောသူတွင် ပျမ်းမျှခြင်း ပေါင်၂၀ မှ ၃၀ အထိအဆီပမာဏရှိကြပြီး၊ အညိုရောင်အဆီကတော့ ၂-၃ အောင်စအထိဘဲရှိနေတတ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း ၎င်း၂ အောင်စပမာဏအလေးချိန်အညိုရောင်အဆီဟာ ပုံမှန်လှုပ်ရှားနေထိုင်သူများအတွက်တနေ့မှာ ကယ်လိုရီ ၃၀၀မှ၅၀၀ အထိလောင်ကျွမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အဖြူရောင်အဆီ(သို့)အဝါကျင့်ကျင့်အရောင်အဆီဟာ အထက်မှာရှင်းလင်းခဲ့သလိုအညိုရောင်အဆီနှင့်အတူမွေးရာပါ၊ အများအပြားပါဝင်လာခဲ့ပြီး လုပ်ဆောင်ပုံနှင့်တည်ရှိပုံများကတော့ အညိုရောင်အဆီနှင့်မတူဆန့်ကျင်ခြားနားပါတယ်။ မွေးကင်းစအရွယ်တွင် အဖြူရောင်အဆီပမာဏဟာအနည်းငယ်သာပါရှိပြီး၊ ဆဲလ်အရွယ်အစားဟာလည်းသေးငယ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာသည်နှင့်အမျှဆဲလ်များရဲ့အရေအတွက်နှင့်အရွယ်အစားဟာလည်းတိုးတက်ကြီးထွားလာကြပါတယ်။ ထိုသို့ဆဲလ်များဆက်လက်ကြီးထွားလာပြီး သတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားသို့ရောက်ရှိချိန်မှာတော့ ဆဲလ်တလုံးမှနှစ်လုံးအဖြစ်သို့ပြိုကွဲသွားရပါတယ်။ ထိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်အဖြူရောင်အဆီများကိုယ်အတွင်းတိုးလာရခြင်း၊ အဆီစုလာရခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ တည်ရှိရာနေရာများကတော့ အရေပြားအောက်နှင့်ကိုယ်တွင်းအဂါင်္အစိတ်အပိုင်းပါတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်တွင်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အဒီပိုစ်တစ်ရူး (Adipose tissue) လို့ခေါ်တဲ့အဆီတစ်ရူးများဟာ ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေတယ်လို့လွဲမှားစွာမှတ်ယူတတ်ကြပါတယ်။ အဖြူရောင်အဆီရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကတော့ ကိုယ်တွင်းအဂါင်္အစိတ်အပိုင်းများအားတည်ငြိမ်မူ့(stable)ဖြစ်နေစေရန်အတွက်ကူရှင်(Cushion)ကဲ့သို့လည်းအထောက်အပံဖြစ်စေပါတယ်။ နေ့စဉ်စားသုံးယူမူ့များမှပိုလျှံသောကယ်လိုရီများကို ဂလိုက်ကိုဂျင်(Glycogen)အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး၊ ဆဲလ်အတွင်းသိုလှောင်ထားပေးခြင်းဖြင့်၊ စွမ်းအင်အလုံအလောက်မရရှိချိန်၊ အရေးပေါ်စွမ်းအင်လိုအပ်ချိန်များတွင်ဆဲလ်အတွင်းသိုလှောင်ထားသော ပိုလျှံသော ဂလိုက်ကိုဂျင် (Glycogen)များကိုစွမ်းအင်အဖြစ်အလျှင်အမြန်ထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။ ထို့အတူအသုံးမပြုနိုင်ဘဲကျန်ရှိပိုလျှံနေသောအဆီများကို ကိုယ်တွင်းကလီစာများအားအဆီမဖုံးလွမ်းစေရန် ကောင်းသောဟိုမုန်းဟုခေါ်သော (Adiponectin hormone)ထုတ်လွှတ်မူ့အားလုပ်ဆောင်စေပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အဆီဟာသင့်ရဲ့ရန်သူမဟုတ်သလို၊ ကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုးခြင်းကိုခွဲခြားသိရှိပြီလို့ယူဆပါတယ်။
၁- Adiponectin hormone ဟိုမုန်းလျော့နည်းခြင်း၊ ထုတ်လွှတ်မူ့အားနည်းလာခြင်းကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းအဆီများစုဖွဲ့ကာ ဝလာစေပါတော့တယ်။
၂- အစားအသောက်လွန်ကျူးစွာ စားသုံးခြင်းမှားယွင်းသောနေထိုင်၊အအိပ်၊အစားစားသောက်ပုံ (Excess Nutrient Intake) ကြောင့် ဇီဝကမ္မဖြစ်ပျက်မူ့(Metabolisms)နှေးကွေးလာခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။
၃- ကိုယ်တွင်းဝင်ရောက်လာသော ကယ်လိုရီ(စွမ်းအင်)ထက် အသုံးပြုသောစွမ်းအင်နည်းပါးခြင်း။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအများအပြားပိုလျှံနေခြင်း။ ဥပမာ။ ကယ်လိုရီလိုအပ်မူ့တွက်ချက်ခြင်းအရတနေ့တာအတွက် ကယ်လိုရီပမာဏ၂၀၀၀ လိုအပ်တယ်ဆိုပါစို့။ ပျမ်းမျှခြင်းအားဖြင့်ကယ်လိုရီ ၂၅၀၀ ရအောင်နေ့စဉ်စားသုံးယူနေမည်ဆိုလျှင်၊ ကယ်လိုရီ ၅၀၀ ဟာပိုလျှံသောကယ်လိုရီပမာဏဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်လိုရီ ၅၀၀ ပမာဏဟာ အဆီ ၂၀ အောင်စ ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်အချိန်တပတ်ကြာသောအခါမှာ ကယ်လိုလီ ၅၀၀x၇ရက်=၃၅၀၀ ကယ်လိုရီဟာ အဆီ၁ ပေါင်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုအလေးချိန် ၁ ပေါင်တိုးတက်စေပါတယ်။
၄- သွေးအတွင်းသကြားဓါတ်မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် အင်ဆူလင်ပမာဏပါမြင့်တက်လာပြီး၊ သကြားဓါတ်ကျဆင်းချိန်တွင် အင်ဆူလင်များမကျဆင်းနိုင်တော့ဘဲ ရပ်တန့်နေခြင်း( Insulin resistance)
လေ့ကျင့်ခန်းအားမည်သို့သောရည်ရွယ်ချက်မျိုးဖြင့်ပြုလုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တနေ့မဟုတ်တနေ့၊ တချိန်ချိန်မှာတော့ခေတ္တရပ်နားလိုက်ရတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သင်သိထားရမှာကသက်ရှိလူသားအားလုံးအတွက်အဓိကအရေးကြီးမူ့ဟာ ကြွက်သားကြီးမားခြင်း၊6pack ရှိခြင်းမရှိခြင်းထက် ကျန်းမာစွာရှင်သန်နေခြင်းကပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာ။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းမှာအဆီဆဲလ်ပမာဏ ၁ သိန်းရှိတယ်ဆိုကြပါစို့။ ဒါကြောင့်နေ့စဉ်ပုံမှန်ရှင်သန်ခြင်းအတွက်သင့်ထံမှာ ဆဲလ်အရေအတွက် ၁ သိန်းရှိကိုရှိနေရမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ Gym မှာ နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်ဆန်စေသော ကာဒီယို(Cardio)လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ အလေးမလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အနည်းနှင့်အများတော့ ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အတူ ကိုယ်ခန္ဓာအဆီပမာဏဟာလည်း ၁၅-၂၀% ပျမ်းမျှလျော့ကျလာနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်ထံမှာရှိနေတဲ့အဆီဆဲလ်အရေအတွက် ၁ သိန်းမှနေ ၉သောင်းပမာထိလျော့ကျ၊ ပျောက်ဆုံးသွားတာလား? အဖြေကတော့ အန်အိုနိုး(NO)ပါ။ သင့်ရဲ့အဆီဆဲလ်ပမာဏ% လျော့ကျသွားခြင်းဟာ ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းမဟုတ်ဘဲ သေးငယ်သွားခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ တနေ့နေ့မှာသင်ဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းဟာရပ်နားဖို့ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ပြောင်းလဲခြင်းများထဲမှ ၁ ချက်ကိုကောက်နှုတ်တင်ပြရလျှင်
- ဇီဝကမ္မဖြစ်ပျက်မူ့ဖြစ်စဉ် (Metabolism)ယုတ်လျော့ကျဆင်းလာမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နေချိန်တွင် သင့်ရဲ့တနေ့တာစွမ်းအင်ကယ်လိုရီလိုအပ်မူ့ဟာ ၂၀၀၀ ဆိုလျှင်၊ လေ့ကျင့်ခန်းရပ်နားချိန်မှာတော့ သင့်ဟာ ပျမ်းမျှခြင်း၁၈၀၀ လောက်ဘဲလိုအပ်တော့မှာပါ။
-သင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကတော့ သင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ မလုပ်ခြင်းထက် ရှင်သန်ရှင်းကိုဘဲ တစိုက်မတ်မတ်ပြုလုပ်နေမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်စဉ်က ကယ်လိုရီလိုအပ်ချက်အတိုင်းရရှိဖို့ သင့်ထံမှတောင်းဆိုနေမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကြောင့်သင်ဟာ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်စဉ်ကအတိုင်းဘဲနေထိုင်စာသုံးနေမည်ဆိုလျှင်၊ ပိုလျံသောကယ်လိုရီများအားကိုယ်ခန္ဓာမှရနိုင်သလောက်လျှင်မြန်စွာလောဘတကြီးစုဆောင်းနေမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်အလွယ်တကူမြင်အောင်ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်၊ သင့်ရဲ့အဆီဆဲလ်ဟာ ရာဘာအိတ်ငယ်တခုနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူပါတယ်။ သင်ဟာနေ့စဉ်အပိုအလျှံကယ်လိုရီတွေကိုထိုးကြိတ်သိုလှောင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ တဖြည်းဖြည်းဖောင်းကားကြီးထွားလာမှာဘဲဖြစ်ပြီး၊ သတ်မှတ်ထားသောပမာဏရောက်ခဲ့ရင်တော့ ကွဲထွက်သွားမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ကွဲထွက်သွားခြင်းဖြင့် ဆဲလ် ၁ခုမှ၂ခု၊ ဆတိုးအဆီဆဲလ်များကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းများပြားလာမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ဆဲလ်များပွားများလာခြင်းဖြင့် သင်ဟာအလျှင်အမြန်ဝလာမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
သင်လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်ပြုလုပ်နေစဉ်တွင် ကယ်လိုရီများဟာလောင်ကျွမ်းဆုံးရှုံးခြင်းများဖြစ်စေပါတယ်။ သင့်တင့်သောပြင်းအားဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်း ၁ နာရီပြုလုပ်မည်ဆိုလျှင် ပျမ်းမျှခြင်းကယ်လိုရီ ၃၀၀ ခန့်လောင်ကျွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်ဟာကယ်လိုရီလိုအပ်ချက်ကိုသတိပြုမိ၊ ထိန်းချုပ်နေထိုင်နိုင်ခဲ့မည်ဆိုလျှင်ဖြင့် အလွယ်တကူဝလာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ရည်ွယ်ချက်ဟာ ကာယဗလမောင်၊မယ်ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဖြင့် Gym ခန်းမကိုမဖြစ်မနေသွားဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ သင်ကြိုးစားတည်ဆောက်ခဲ့ရသော ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်မပျက်စီးစေရန်အတွက်(ကြွက်သားသေးငယ်သွားခြင်းကိုထိန်းနိုင်ရန်)၊ လေ့ကျင့်ခန်းရပ်နားထားချိန်များတွင် အစားအသောက်ဟာ အဓိကရေးကြီးဆုံးဘဲဖြစ်ပါတယ်။
၁- ကစီဓါတ်ကိုလျော့ချပါ။ (Cut down on carbohydrate)
ယတိပြတ်ကစီဓါတ်အားဖြတ်ဖို့ပြောခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ လျော့စားခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်။ (စားသုံးရန်-အသား၊ငါး၊ ဥအမျိုးမျိုး၊ အသီးအရွက်။)
ဂျုံမှုန့်၊ အဖြူရောင်သန့်စင်ထားသောပေါင်မုန့်၊ အာလူး။ ထမင်းဖြူ စသည့်အစားအစာများဟာ လွယ်ကူစွာအစာခြေဖျက်နိုင်ပြီး၊ အချိန်တိုစွမ်းအင်သာရရှိစေပြီး အဆီအဖြစ်မြန်ဆန်စေပါတယ်။ (စားသုံးရန်။ ပေါင်မုန့်အကြမ်း၊ ဆန်လုံးညို၊ ကန်စွန်းဥနှင့် ကောက်နှံစပါးမျိုးစုံတို့ဖြစ်ပါတယ်။
အနည်းဆုံးအသားဓါတ်(ဂရမ်)ပမာဏအားဖြင့် ညီမျှသောသင့်ကိုယ်အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) ရရှိအောင်စားသောက်ပါ။ ဥပမာ။ သင်ဟာ ၁၀၀ကီလိုအလေးချိန်ရှိသူဆိုလျှင် ၁၀၀ဂရမ်အသားဓါတ်နေ့စဉ်သားသောက်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (စားသုံးရန်။ ကြက်ဥအကာ၊ ကြက်ရင်ဘုံသား၊ ငါး၊ ကုလားဘဲ၊ ပဲကတ္တီဘာ၊ စားတော်ပဲအမျိုးမျိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်)
ကောင်းသောအဆီများစားသုံးခြင်းဖြင့် မကောင်းသောအဆီများကိုလောင်ကျွမ်းလျှော့ကျစေပါတယ်။ (စားသုံးရန်။ အခွံမာအသီးများ(သစ်အယ်သီး၊ မြေပဲ၊ သီဟိုဋ္ဌ်စေ့၊ သစ်ကြားသီး၊ ဗန်ဒါစေ့၊ Almonds)၊ မြေပဲထောပါတ်၊ မြေပဲဆီ၊မုန်ညှင်းဆီ၊ သံလွင်ဆီ၊ နေကြာဆီ၊ ဆော်လမွန်ငါးနှင့် အသီးအရွက်အဆံအစေ့များတို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန်လျှော့ချမည်ဆိုလျှင် ဆားနှင့်သကြားဟာသင့်အတွက်အကြီးမားဆုံးရန်သူဖြစ်ပါတယ်။ သကြားဖြင့်ပြုလုပ်သောမုန့်အမျိုးမျိုးနှင့် အလွယ်တကူရရှိနိုင်သောဆီကြော်အစားအစာများရှောင်ကျဉ်ပါ။
၆- ဟင်းသီး၊ ဟင်းရွက် အသုပ်စားသုံးပါ။
မုန့်လာဥနီသုပ်၊ သခွားသီးသုပ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးသုပ်၊ ဂေါ်ဖီသုပ်နှင့်အခြားအစိမ်းရောင်ရှိသောအရွက်မျိုးစုံအသုပ်တို့အား အနည်းဆုံးတပါတ်တကြိမ်စားသုံးရပါမယ်။ (မှတ်ချက်။ အချိုမှုန့်လုံးဝမပါဝင်ရပါဘူး)
နေ့စဉ်အနည်းဆုံး ၃ လီတာခန့်သောက်သုံးသောအလေ့အကျင့်နေ့စဉ်ပြုလုပ်ပေးပါ။
အဆီများစုဝေးလာခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဝလာခြင်းဖြစ်စဉ်ဟာ လေ့ကျင့်ခန်းရပ်တန့်ခြင်းဖြင့်သက်ဆိုင်မူ့မရှိတာထပ်မံသက်သေပြ၊ရှင်းပြဖို့မလိုလောက်အောင်စာဖတ်သူနားလည်လောက်ပြီဟုယူဆပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန်မတိုးဖို့၊ ဝိတ်မတက်စေဖို့ဆိုရင်ဖြင့်စားသုံးတဲ့ကယ်လိုရီပမာဟာ လောင်ကျွမ်းပစ်နိုင်သောကယ်လိုရီပမာဏနဲ့ထပ်တူညီနေဖို့ အထူးဂရုစိုက်ရပါမယ်။ (Keep your calorie intake equal to your calorie output) (input=output)လေ့ကျင့်ခန်းရပ်နားလိုက်ခြင်းအားဖြင့် အနည်းနှင့်အများဆိုသလို သင်ရဲ့ခွန်အားသန်မာမူဟာလျော့ကျလာမှာတော့မလွဲမသွေပါဘဲ။ တခါတရံမှာ စဉ်ဆက်မပျက်လေ့ကျင့်နေခြင်းထက် ရက်သတ္တပါတ် ၂ ပါတ်ခန့်အနားယူလိုက်ခြင်းဟာလည်း၊ သင့်ရဲ့ကြွက်သားများဆက်လက်ကြီးထွားစေဖို့များစွာအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပြန်ပါတယ်။ မည်သို့သောအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဘဲဖြစ်စေသင့်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လေ့ကျင့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်ဟာလဖြင့်ချီပြီးအနားယူခဲ့မည်ဆိုလျှင်၊ လေ့ကျင့်ခန်းပြန်လည်စတင်ချိန်ဟာသင့်အတွက်တော့ ငရဲကမ္ဘာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိစေမှာမလွဲဧကန်ပါ။ The hardest part of exercising is detraining/starting again. ပြန်လည်ခံစားရမယ့်ကြွက်သားနာကျဉ်ခြင်းများမှသင်ဘာကြောင့်အနားယူခဲ့ရတာလဲဆိုတာကို ပြန်လည်နောင်တရစေမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ထပ်မံအမှာပါးချင်တာကတော့ သင်ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်တော့မယ် (သို့) ယခုမှစတင်လေ့ကျင့်တော့မယ်ဆိုလျှင် "ဖြေးဖြေးနှင့်မှန်မှန်ပြုလုပ်ရင်း ဒါဏ်ရာမရရှိစေဖို့လည်းအထူးသတိပြုစေချင်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 2:02 AM No comments:
ငှက်သိုက်သည် ပျံလွှားငှက် တစ်မျိုးတွင် ပါဝင်သည့် ငှက်များက
လုပ်သော အသိုက် ဖြစ်ပါသည်။ မိုးစာငှက်၊ ပြီးလဲငှက်၊ ဇီဝစိုးးငှက်များမှ ငှက်သိုက်ကို ထုတ်ယူရရှိနိုင်၏။ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ငှက်သိုက်ကို ဇီဝစိုးငှက်မှသာ ရရှိပါသည်။ ဇီဝစိုးငှက်သည် လေထဲတွင် ပျံသန်းရင်း ပိုးမွှားကောင်များကို ဖမ်းစားတတ်သောကြောင့် ``လေစားငှက်´´ ဟုလည်းခေါ်သည်။
ဇီဝစိုး ငှက်မှ အမဲရောင်ငှက်သိုက်နှင့် အဖြူရောင် ငှက်သိုက် (၂)မျိုးရရှိပါသည်။ အမဲရောင်ငှက်သိုက် ကို Collocalia innominata ဆိုသည့် ဇီဝစိုးငှက်မှ ရရှိပြီး အဖြူရောင်ငှက်သိုက်ကို Collocalia fuciphaga ဆိုသည့် ငှက်သိုက်မှ ရရှိသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းရှိ ငှက်သိုက် ကျွန်းပေါင်း(၃၂)ကျွန်းမှအဖိုးတန်ငှက်သိုက်များ ထွက်ရှိပါသည်။
မြိတ်ကျွန်းစုရှိ ငှက်သိုက်များကို ပုလောမြို့နယ်ရှိ မလိကျွန်း၊ကျွန်းစုမြို့နယ် ရှိ ရေအေးကျွန်းစု၊ ဘုတ်ပြင်း မြို့နယ်ရှိ ပုလုတိကျွန်းစု၊
ကော့သောင်းမြို့နယ်ရှိ ကဆိုင်းလှနှင့် ကော့ငန်းကျွန်းစု များမှ ရရှိ၏။ ယင်းကျွန်းစုများ အနက်မလိကျွန်းမှ ငှက်သိုက်အများဆုံး ရရှိသည်။
ငှက်သိုက် အသုံးဝင် ပုံ
credit : သားငယ်
Posted by Alex Aung at 5:14 AM No comments: